Wareegyada dhiigga ee Tayada Sare ee Dhiig-baxa Dhiigga loogu talagalay warshad keliya ee wax soosaarka iyo soosaarayaasha ah | Sanxin
Wareegyada dhiigga ee unugyada dhiig-baxa ee dhiig-baxa ee hal-hal-hal
Wareegyada Cirrhaafka Dhiig-baxa Sterile ee Isticmaalka Keliya waxay xiriir toos ah la leeyihiin dhiigga bukaanka waxaana loo isticmaalaa muddo gaaban oo shan saacadood ah. Badeecadani waxaa loo adeegsadaa kiliinik ahaan, oo leh shaashadda iyo dialyzer, waxayna u shaqeysaa marinka dhiigga ee daaweynta hemodialysis. Qadka xididdada dhiigga ayaa dhiigga bukaanka ka saaraya jirka, wareegga wareegga dhiigga wuxuu bukaanka ugu celinayaa dhiigga “la daweeyay”.
Material Qalabka badbaadada (bilaash DEHP)
Tuubada ayaa laga sameeyay maadada PVC waana bilaash DEHP, taasoo hubineysa badbaadada sifaynta bukaanka.
Tube Tuubbo jilicsan gidaarka gudihiisa
Dhaawaca unugga dhiigga iyo dhalista goobooyin hawo ayaa yaraaday.
Materials Qalab ceyriin oo heer caafimaad ah oo tayo sare leh
Qalab aad u fiican, tilmaamayaal farsamo oo xasiloon iyo isku xirnaan wanaagsan.
Adapt La qabsi wanaagsan
Waxaa loo isticmaali karaa moodellada soo saarayaasha kala duwan, iyo wareegga dhiigga / khadka dhiigga waa la habeyn karaa, iyo qalabyada sida bacda bullaacadaha iyo xirmada faleebada ayaa la dooran karaa.
Design Naqshadeynta naqshada
Qalabka tuubooyinka: Naqshadeynta naqshadeynta ergonomic ee waxqabadka hawlgalka fudud oo lagu kalsoonaan karo.
Dheriga Venous: Daloolka u gaarka ah ee dheriga xididka ayaa yareynaya sameynta xumbada hawada iyo xinjirowga dhiigga.
Ku duri garabka wax ilaaliya: dekedda tijaabada ah ee saddexda dhinac ah si loo yareeyo halista ah in cirbado lagu mudo inta lagu jiro sambal ama cirbad, si loo ilaaliyo takhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaad.
Hemodialysis Dhiirrigelinta wareegga dhiigga iyo moodellada:
20ml 、 20mlA ml 25ml 、 25mlA 、 30ml 、 30mlA 、 50ml 、 50mlA
Hore: Budada heemodialysis
Xiga: Miiraha Dialysate
Sunta Dhiigga Iyo Nadiifinta
Dhiig Sifaynta Jirka
Daaweynta Daahirinta Dhiiga
Hollow fiber hemodialyzer (qulqulka sare)
Hollow fiber hemodialyzer (qulqulka hooseeya)
Budada heemodialysis (oo ku xiran mashiinka)
Xirmada kalkaalisada sifeynta jirka